လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါ ၀ င်သောဘာသာရပ်များတွင်ထူးချွန်သောဆုများခံစားခွင့်ကိုပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် (၂၀၁၅) - Your Brain On Porn
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (2015) နဲ့ဘာသာရပ်များအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ်တွေကိုတိုးမြှင် sensitivity ကို
မှတ်ချက်များ: ဒီလေ့လာမှုယခုအဖြစ်ထုတ်ဝေထားပြီး, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုစှဲဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအမျိုးသားများအတွက်တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု (Gola et al။ , 2017)။ သက်ဆိုင်ရာသုတေသနမြင်ဘို့:
ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 39 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) သည်စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
လေ့လာမှု ၃၀ ခန့်သည်တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှု (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်.
ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 15 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့တို့က, အညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ် supporting ။ (ဤရက်စွဲစက္ကူတစ်ဦးစာပေပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်ခဲ့ ထိုသို့ကိုးကားခဲ့စာတမ်းများအရှိဆုံးအတု။ )
27 လေ့လာမှုများ porn အသုံးပြုမှု / လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal လင့်ထားသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်။
နီးပါး 60 လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်.
မာတေယူချ် K. Gola * MALGORZATA WORDECHA, GUILLAUME SESCOUSSE, BARTOSZ KOSSOWSKI နှင့် Artur MARCHEWKA
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) conceptualize နှင့်အကျိုးရှိစွာ psychotherapeutic ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖျော်ဖြေဖို့ဘယ်လိုကုသနှင့်သုတေသီများအကြားဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးမှုရှိပါသည်။ CSB ဤပြဿနာအပေါ်အလငျးဖွာနိုင်ပါတယ်အခြေခံသော့ချက်ဦးနှောက်-ဆားကစ်ဖော်ထုတ်ခြင်း။ ယခင်လေ့လာမှု၌ (Sescousse et al ။ , 2013) ပြသခဲ့ပြီး, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ (PG) Non-ငွေကြေးဆိုင်ရာ (ဒီအခြေအနေမျိုးအတွက်, ခေါ်ဆောင်သွား) မက်လုံးပေးနှိုင်းယှဉ်ငွေကြေးပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်း။ ဤသည် Non-Mc နှိုင်းယှဉ်ငွေကြေးဆိုင်ရာတွေကို (Mc) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် ventral striatum (VStr) ၏ reactivity ကိုပိုမိုတိုတောင်းတုံ့ပြန်မှုကြိမ် (RTs) တွင်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ခဲ့သည်။ CSB အခြေခံဦးနှောက်ယန္တရား PG ဆင်တူသည်လျှင်, ငါတို့သည်ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုအဘို့အဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်တွေကို, ဆိုလိုသည်မှာတိုတောင်း RTs (EC) ကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့် Non-EC များအတွက် VStr တုံ့ပြန်မှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသငျ့သညျ။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့နှစ်ဦးစလုံးငွေကြေးနှင့်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ် (ပုံထဲမှာလက်ဝဲထိပ်) ကြိုးကိုင်ထားတဲ့မက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်အတွက်စေ့စပ်စဉ် fMRI သုံးပြီးနှင့်6CSB (တိုးတက်မှုအတွက် data တွေကိုရှာမှီး) နှင့်5ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များ (HC) ၏ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်သည်ဤယူဆချက်ကိုစမ်းသပ် ။
CSB ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း (HC နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) EC များအတွက် VStr မြင့်မား reactivity ကိုတို့ကရှေ့ပြေးဘာ, ထို့နောက် Mc (ပုံထဲမှာအောက်ခြေ) EC မှသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား sensitivity ကို (တိုတောင်း RTs) ဖော်ပြ။ Non-EC များအတွက် VStr ၏အဘယ်သူမျှမတုံးတုံ့ပြန်မှု CSB လူနာ (ပုံထဲမှာညာဘက်ထိပ်) တွင်ပြသလျက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပဏာမရလဒ်တွေကို CSB လူနာ Non-ခေါ်ဆောင်သွားမက်လုံးပေးနှိုင်းယှဉ်ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ differential ကို sensitivity ကိုထောက်ပြ, ဒါပေမယ့် Non-EC ရန်မတုံး VStr တုံ့ပြန်မှုအတူ။ အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောထို့နောက် PG အဲဒီရလဒ်တွေကို Non-EC များကနှိုးဆွပေးခံရဖို့စွမ်းရည်ကိုအဘယ်သူမျှမဆုံးရှုံး EC များအတွက်ပိုမိုမြင့်မား CSB preference ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။